Iwo akanakisa chondroprotectors embwa kusimbisa majoini | Imbwa Nyika
Susana godoy | | Zvirwere
Isu tinogara tichiziva kwazvo hutano hwemhuka dzedu. Nekudaro, nhasi tinofanirwa kutaura nezve iyo chondroprotectors imbwa, nekuti kunyangwe isu tisingagare tichipihwa zvakanyanya mishonga, hapana chakafanana nekutora zvinowedzerwa zvechisikigo kuti zvikwanise kukubatsira kuti unzwe zvirinani.
Sezvo isu tichiziva kwazvo, kune zvimwe zvirwere zvisingagoni kudzivirirwa, kunyangwe isu tichizoda, asi izvo zvinogona kuve zvakajairika. Saka, Ino inguva yekuyedza kudzikisira mhedzisiro yavo uye ndipo panouya mukana wekuti chondroprotectors embwa dzinotinetsa nhasi. Iwe unoda kuziva zvese nezve ivo?
1 Chii chinonzi chondroprotector
2 Zvakanaka here kuti imbwa yangu itore chondroprotectants kana isina chirwere chejoinhi?
3 Mune izvo zvirwere chondroprotector inobatsira imbwa
4 Mhando dzakanakisa dze chondroprotectors dzembwa
5 Ko chondroprotectors embwa dzine mhedzisiro here?
6 Maitiro ekupa chondroprotectors kune imbwa yangu
7 Ko chondroprotectors inoshanda kune imbwa here?
8 Kwokutenga chondroprotectors yakachipa kune imbwa
Chii chinonzi chondroprotector
Cosequin SE506112 Kuchengeta ...
Cosequin 00.1420.00 Kutanga ...
Tinogona kutaura nezvavo kuti iwo echisikigo anowedzera kana echikafu chinowedzera icho chine chinangwa chekuvandudza hydration uchipa zvinovaka shwashwa. Kuti majoini anozopihwa mubairo, akasimba uye anodzivirirwa, sezvo sezvatakambotaura, inogona kuve imwe yezvirwere zvakajairika imbwa zhinji.
Izvo zvakati, inofanirawo kuyeukwa kuti inogona kudzora kana kudzora hosha dzakadai seosteoarthritis. Chimwe chinhu chinogona kutungamira mukuremara, kurasikirwa kwekufamba kana kuomarara uye izvo zvinofanirwa kurapwa kana kudzivirirwa nekukurumidza sezvazvinogona, nekudaro zvinowedzerwa zvepanyama zvakakoshawo muzviitiko zvakaita seizvi.
Zvakanaka here kuti imbwa yangu itore chondroprotectants kana isina chirwere chejoinhi?
Chokwadi ndechekuti hongu. Nekuti kune rumwe rutivi takatotaura kuti izvo zvinowedzerwa zvechisikigo, nekudaro hazvizove nemhedzisiro pahutano hwezvipfuyo zvedu, asi zvakapesana nekuti zvinozovabatsira kuti vagare vakagwinya. Zvakawedzera, kana iwe usina chero chinozivikanwa chirwere chejoinhi, zvinogara zviri nani kudzivirira.
Kana imbwa yako iri yakakura rudzi, ivo vanowanzo kuve nematambudziko mazhinji akabatana, zvakafanana sekunge ivo vakafuta zvakanyanya kana vakave nerumwe rudzi rwekukuvara munguva yakapfuura. Mhosva dzakadai dzinogona kuve nematambudziko akakura mune ramangwana uye nekudaro, kudzivirira kunogara kuri nani. Nekudaro, chondroprotectors embwa haisi yekurapa asi yekuwedzera.
Mune izvo zvirwere chondroprotector inobatsira imbwa
Hip dysplasia: Kana imbwa dzichikura dzinogona kuve nedambudziko rakadai uye izvo zvinogona kukonzera kusagadzikana, pamwe nekurwadziwa.
Matambudziko emabvi: Zvimwe zve zvakajairika ndeye kneecap luxation kana kukuvara kwetsinga.
Mushure mekuvhiyiwa: Izvo zvinodawo kuti kukurumidza kupora, kusanganiswa nehunyanzvi hwekuvandudza, izvo zvinoratidzirwa nachiremba.
Osteoarthritis: Kana majoini achinge asakara, kurwadziwa kwacho kunenge kwakanyanya uye kusingaperi, saka chondroprotector chembwa dzinogona kudzora izvi zviratidzo.
Arthritis: Zvakare zvine chekuita nekuzvimba kwemajoini uye izvo zvinowedzera zvichave zvakakosha zvakanyanya.
Osteoarthritis: Takambozvitaura uye ndicho chirwere chejoinhi chinowanzoitika. Neichi chekuwedzera kuzvimba kunorwiwa.
Mhando dzakanakisa dze chondroprotectors dzembwa
Kunyangwe isu tichigona kuwana mamwe mabrand anozivikanwa zviri nani kune vese, ichokwadi kuti Cosequin iri kuitawo nzvimbo pakati peanonyanya kudiwa chondroprotectors embwa. Zvinoratidzika kunge zvine chinangwa chakanaka kwese asi kunyanya nembwa idzo dzakanyanya kufuta kana kuti vatova nezera rakati. Pamusoro pekudzivirira shwashwa kupfeka uye mamwe matambudziko akabatana.
Iyo ndeimwe yeanonyanya kushandiswa nekuti ichokwadi kuti zvakare ndeimwe yeanozivikanwa nevose. Mune ino kesi yakagara ichishandiswa kurapa kukuvara. Mune zvimwe zviitiko chete kukuvara kuri kwerudzi rwakati asi mune mamwe akawanda anova asingagumi. Vanowanzove nemaonero akanaka kwazvo kana zvasvika pamhedzisiro. Kuwedzera kune ine vhitamini E.
Isu tatoona kuti zvakajairika kuti imbwa dzedu dzive nechimwe chirwere chepfupa uye kana chiremba wako akavimbika akakuudza kuti osteoarthritis inogona kupinda muhupenyu hwako chero nguva, iwe unoda chinowedzerwa chakadai. Nekuti kuumbwa kwayo ndiko kwakasiyana kwazvo uye izvi zvinobatsira iwe kudzivirira kana kugadzirisa zvinokonzerwa nechirwere.
Farmadiet Hyaloral Inobereka ...
Hatina kukwanisa kusiya iyi imwe chondroprotector kune imbwa dziri mupombi. Nekuti mune ino kesi haisi chete iwo maonero anopa zvakanaka mapoinzi asiwo kune zvidzidzo zvinoratidza kushanda kwayo. Pamusoro peizvozvo isu tinosimbisa zvakare kunaka kwayo, izvo zvinonyanya kufadza zvipfuyo zvako.
Ko chondroprotectors embwa dzine mhedzisiro here?
Zvakare kutaura, tinogona kuti kwete. Chondroprotectors imbwa hadziwanzo kuve nemhedzisiro. Asi hongu, iwe unogara uchifanirwa kuve wakangwarira mune dzimwe nharaunda. Nekuva neglucosamine pakati pezvakagadzirwa, inogona kuwedzera njodzi yeglaucoma. Kana imbwa yako ichirwara nechirwere cheshuga zvinodikanwa kuti ubvunze chiremba wemhuka. Izvo zvinodawo kuibvunza kana uri weergisi kune chero chikafu, nekuti izvi zvinogona kubatana nechimwe chezvinhu zvekuwedzera mune mubvunzo. Mune zvimwe zviitiko, asi zvakanyatsojeka, manyoka kana kurutsa zvakatsanangurwa asi hazvirambe.
Maitiro ekupa chondroprotectors kune imbwa yangu
Ichokwadi ndechekuti kana zvasvika mupiritsi fomati, zvinogona kuve zvishoma kugadzikana, mune dzimwe nguva. Nekuti haisi imbwa dzese shamwari dzinotora mushonga. Zvimwe zvezvinowedzera izvi zvatove nekuravira zvakanaka kuti unakirwe. Asi ichokwadi kuti iyekana zvirinani kusanganisa pakati pechikafu.
Chimwe nechimwe chakatarwa chinounza nhanho dzayo kuti dzikwanise kupa iyo chondroprotector kune chako chipfuwo. Asi kazhinji tinogona kukuudza izvozvo huwandu hwayo hunoenderana nehuremu chechipfuwo chako. Nechikonzero ichi, imbwa dzinorema pakati pe5 kusvika 10 kilos dzinogona kutora zvishoma sehafu yetabhenakeri zuva rega rega. Kana iwe ukawana makirogiramu gumi saka hongu tinogona kuenda kunovapa piritsi zuva rega rega. Asi sekutaura kwedu, kuve nechokwadi, hapana chakafanana nekuverenga iyo package yekuisa kana kubvunza vet.
Ko chondroprotectors inoshanda kune imbwa here?
Ramba uchifunga kuti hausi mushonga pachawo, asi panzvimbo pekuwedzera iyo inogona kuchengetedza nekutarisira matambudziko emangwana mune edu mhuka. Nekudaro, ndine chivimbo mazviri, pandakatanga kupa imbwa yangu chondroprotectants nekuda kwekurema uye kuva nematambudziko akabatana ndakaona kuti yainyatsoshanda. Ichokwadi kuti hachisi chinhu chinoshamisa kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera, asi iwe unoona mhedzisiro. Panyaya yekufutisa, mimwe mirawo inofanirwa kuteverwa kunatsiridza mamiriro aya, asi iyo chondroprotector inobatsira kuvandudza kugona kwavo kana izvo zvimiro zvemuviri zvavanowana nekuda kwekufamba kwenguva kana matambudziko ehutano. Mune chipfuwo changu pakanga paine shanduko, ndichisiya kumashure mamwe matambudziko ekufamba uye kuve nemamiriro ari nani.
Kwokutenga chondroprotectors yakachipa kune imbwa
Amazon: Kunyangwe iri hofori yekutengesa par kugona, zvinofanirwa kutaurwawo kuti isu tinogona kuwana akasiyana mabrand, anonyanya kuzivikanwa uye avo vane akanakisa ratings. Izvi zvinoita kuti sarudzo yako igare iri yechokwadi uye zvakare, iine mitengo inokwikwidza zvakanyanya pamusika. Sezvo idzi mhando dzekuwedzera dzisingazivikanwe nekunyatso kudhura.
kiwiko: Icho chimwe chezvitoro zvezvipfuyo par kugona uye nekudaro, ivo zvakare vane chondroprotectors embwa. Ivo vane akati wandei mabhureki uye hongu, nemitengo yakasiyana siyana mune yega yega, saka unogona kusarudza zvichibva pane zvaunoda. Imwe yedzakanakisa nzira dzatinofanirwa kugona kuchengetedza edu edu ane furry.
Kimpharma: Zvakare zvinowedzerwa zvemhuka zvinosvika kuKimipharma uye nekuwedzera, iwe unozogona kunakirwa mitengo inodhura kwazvo, iyo inobvumidza iwe kuti upe yakanakisa kune ako mhuka dzinovaraidza pasina kubhadhara yakawanda yacho. Iine dzimbahwe rayo muPortugal, ndechimwe chezvitoro zvinonyanya kuzivikanwa mumakore apfuura, nekuda kwekuvandudza hupenyu.
Tendenimal: MuTíanimal iwe unowana zvinowedzera kubva kumatengo akaderera kune izvo zvataive nazvo mupfungwa. Mhando dzakasiyana nemapiritsi fomati kuitira kuti iwe ugone kuchipa nenzira yakasununguka kune zvipfuyo zvako. Uye zvakare, pamwe nekuchengetedzeka uye kuvimba kwechitoro chakadai.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Zvirwere » Chondroprotectors imbwa